दशै तिहार नजिकिन्दै छ, विदेश जानको लहर बढ्दै छ - bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > दशै तिहार नजिकिन्दै छ, विदेश जानको लहर बढ्दै छ
८ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:०२ bampijhyala
०८ असोज, बाँपीझ्याला, धनगढी । असोज महिना सुरु भइसक्दा नेपालीहरुको महान चाड दशै र तिहार पनी नजिकिन्दै छ । साधारण अवस्थामा यो समय विदेशिएका नेपाली स्वदेश फर्किने बेला हो तर कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष भने अवस्था केही भिन्न देखिएको छ ।
विगतका वर्षहरुमा असोज लागेपछि पश्चिमी सीमा नाका गौरीफन्टा र गड्डाचौकी भएर स्वदेश फर्किनेको लर्को हुन्थ्यो । वर्षभरि विदेश अर्थात मुगलानमा पसिना बगाएका नेपालीहरु दशगजामा पुग्दा दङ्ग हुन्थे । तर अहिले ती सुदूरपश्चिमका अनुहार र पश्चिमी सीमा नाकाको दृश्य फेरिएको छ ।
अहिले स्वदेश फर्किनेको सङ्ख्याभन्दा रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीको सङ्ख्या तीन गुणा बढी रहेको छ । कोरोना भाइरसको प्रभावले छाक टार्नै मुश्किल भएपछि भारत जान लागेको बझाङका स्थानीय प्रयाग कोइरालाले बताउनुभयो । ‘स्वदेशमै बसे पनि रोजगारी पाइने होइन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पेट पाल्नकै लागि भए पनि जानुपर्ने भारत नै हो ।’
कोरोनाकै प्रभावका बीच गएको असार महिनामा घर फर्किनुभएका उहाँ फेरि त्रिनगर–गौरीफन्टा नाका हुँदै भारत पस्नुभयो । ‘दशैँ र तिहार नजिकै आउँदै गरेको भए पनि दैनिकी चलाउनै मुश्किल हुन लागेपछि भारत जाँदैछु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले रोजगारीको वातावरण बनाउला भन्ने विश्वास छैन ।’
अहिले यसअघि कहिल्यै भारत नगएका सुदूरपश्चिमवासी पनि रोजगारीका लागि त्यसतर्फ जान बाध्य छन् । नेपालीहरुको महान् चाड दशैँ आउन एक महिनामात्र बाँकी रहेका बेला रोजगारीकै लागि भारत जान लागेको गौरीफन्टामा भेटिएका हरिश मल्लले बताउनुभयो । असोज सुरु भएपछि मात्रै गौरीफन्टा नाका भएर झण्डै ६ हजार प्रदेशवासी भारत पसेका छन् । सशस्त्र प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार असोज १ गते पाँच सयभन्दा बढी, २ गते नौ सय ६४ जना, ३ गते नौ सय ४६ जना, ४ गते एक हजार ३६ जना, ५ गते एक हजार दुई सय ८७ जना र ६ गते एक हजार ६ सय नौ जना सुदूरपश्चिमेलीहरु भारत पसेका छन् ।
गौरीफन्टा नाका भएर भारत जानका लागि सयौँको सङ्ख्यामा प्रदेशवासी लाइनमा बसेर मुगलान पसिरहेका छन् । गएको चैत महिनादेखि सुरु भएको कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण लाखौँ सुदूरपश्चिमवासी स्वदेश फर्किएका थिए । कतिपय कोरोनाको त्रासले फर्किएका थिए भने कतिपय रोजगारी गुमेपछि घर आएका थिए । झण्डै चार, पाँच महिनाको स्वदेश बसाइपछि घर खर्च चलाउनसमेत नसकिने भएपछि फेरि पनि भारत जानु परेको उनीहरुको गुनासो छ । न उनीहरुलाई सरकारको स्वरोजगारको कार्यक्रमले रोक्न सकेको छ न भारतमा बढिरहेको कोरोना भाइरसको त्रासले रोकेको छ । सरकारले युवाहरुले बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने बताए पनि नीति तथा कार्यक्रमहरु कागजमै सीमित भएका छन् ।
जसका कारण सयौँ सङ्ख्यामा सुदूरपश्चिमेलीहरु चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा पनि विदेशिन बाध्य छन् । यो समस्या सुदूरपश्चिमको मात्रै नभएर सिङ्गो नेपाल भरीको हो । अहिले प्रमुख नाकाहरुमा स्वदेश भित्रिने भन्दा बाहिरिनेको सङ्ख्या धेरै छ । हातमुख जोड्न र दैनिक गुजारा गर्नकै लागि बिदेसिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला कुन्नि ? यो विदेशिनेहरुको साझा प्रश्न हो ।
सुन तोलामा १२ सयले घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
चीनमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिअन्ट फैलिन थालेपछि बढ्दो चिन्ता ८ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:०२
२ हजार २७९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि, २३ जनाको मृत्यु ८ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:०२
आज दोलखामा थप ३८ जनामा कोरोना पुष्टि, १८ संक्रमण मुक्त, ९ दिनमा २१० जना संक्रमण बृद्धि ८ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:०२
अमेरिकाले आफ्नो फौज फिर्ता लिन गरेको आकस्मिक निर्णय देशको खस्कँदो सुरक्षास्थितिको प्रमुख कारक हो : अफगानिस्तान राष्ट्रपति घानी ८ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:०२
प्रमोद खरेलको ‘बैगुनी’मा आस्था र दीपक (भिडियोसहित) ८ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:०२